Bit By Bit - Ethics - 6.3 Digital bụ dị iche iche
Social nchọpụta na dijitalụ afọ nwere dị iche iche e ji mara na Ya mere na-ewelite dị iche iche usoro ziri ezi ajụjụ.
N'ime oge analog, ọtụtụ nchọpụta ọha na eze nwere ọnụ ọgụgụ dị ntakịrị ma rụọ ọrụ n'ime usoro iwu doro anya. Nchọpụta mmadụ na afọ dijitalụ dị iche. Ndị nchọpụta-mgbe mgbe ha na ụlọ ọrụ na ndị gọọmenti na-arụkọ ọrụ-nwekwuru ike karịa ndị nabatara karịa n'oge gara aga, na iwu gbasara otú ike a ga-esi eji ya emebebeghị. Site na ike, ihe m na-ekwu bụ ike ime ihe ndị na-enweghị nkwenye ma ọ bụ ọbụna ịma. Ụdị ihe ndị na-eme nchọpụta nwere ike ime ndị mmadụ gụnyere ịhụ omume ha na idebanye aha ha na nyocha. Dika ike nke ndi nyocha na-acho ma na-echeghari na-abawanyewanye, enweghi mmetakota ndi ozo dika ihe omuma banyere otu esi eji ike ahu eme ihe. N'ezie, ndị nchọpụta ga-ekpebi otú ha ga-esi jiri ike ha dabere na iwu, iwu, na iwu na-enweghị isi. Njikọ a nke ike dị ike na nduzi na-enweghị isi na-emepụta ọnọdụ siri ike.
Otu ụdị ike ndị na-eme nnyocha ugbu a bụ ikike ileba anya n'àgwà ndị mmadụ n'enweghị nkwenye ma ọ bụ mmata. Ndị nchọpụta nwere ike, n'ezie, mee nke a n'oge gara aga, mana na afọ dijitalụ, ọnụ ọgụgụ dị iche iche, eziokwu nke ọtụtụ ndị na-agbapụta nnukwu ihe ọmụma data kwusara ugboro ugboro. Karịsịa, ọ bụrụ na anyị na-esi na ọnụ ọgụgụ nke onye na-amụ akwụkwọ ma ọ bụ prọfesọ ma chee na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmenti nke ndị na-eme nchọpụta na-ejikarị arụkọ ọrụ ọnụ-nsogbu ndị a nwere ike ịghọ ihe mgbagwoju anya. Otu ihe atụ na m na-eche na-enyere ndị mmadụ aka iji anya nke uche echiche nke nyocha onyunyo bụ panopticon . Na mbụ Jeremy Bentham nyere ya ka ọ bụrụ ihe owuwu maka ụlọ mkpọrọ, panopticon bụ ụlọ dị okirikiri nke nwere sel ndị e wuru gburugburu ụlọ nche (central) (nọmba 6.3). Onye ọ bụla nke nọ n'ụlọ nche a nwere ike ịhụ àgwà niile nke ndị mmadụ n'ime ụlọ na-enweghị onwe ya. Onye nọ n'ụlọ nche ahụ bụ otu ọhụụ a na-adịghị ahụ anya (Foucault 1995) . Nye ụfọdụ ndị na-akwado nzuzo, afọ dijitalụ emeela ka anyị banye n'ụlọ mkpọrọ panoptic ebe ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na ndị ọchịchị na-ekiri ma na-echegharị omume anyị mgbe nile.
Onu ogugu 6.3: Ekere maka ulo mkpo panopticon, nke Jeremy Bentham nyere nke mbu. N'ime etiti, enwere onye ọhụhụ a na-adịghị ahụ anya bụ onye nwere ike ịhụ omume nke onye ọ bụla ma enweghi ike ịhụ ya. Edere Willey Reveley, 1791 (Isi: Wikimedia Commons ).
Iji mee ka ihe atụ a dịkwuo ntakịrị, mgbe ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta mmekọrịta mmadụ na-eche banyere oge dijitalụ, ha na-eche na ha dị n'ime ụlọ nche ahụ, na-ahụ omume na ịmepụta nchekwa data nchekwa nke a pụrụ iji mee ihe ọ bụla dịgasị iche iche na-akpali akpali ma dị mkpa. Ma ugbu a, kama iche na ị nọ na ụlọ nche ahụ, chee na ị nọ n'otu n'ime mkpụrụ ndụ. Usoro nchekwa data ahụ malitere ịdị ka ihe Paul Ohm (2010) kpọrọ ebe nchekwa data nke mbibi , nke a pụrụ iji mee ihe n'ụzọ achọghị.
Ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ a nwere obi ụtọ iji biri na mba ebe ha na-atụkwasị ndị na-ahụ anya ha anya ka ha jiri ọrụ data ha na-eme ihe ma chebe ya n'aka ndị iro. Ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ anaghị enwe obi ụtọ, m makwaara na nsogbu ndị nlebara anya na-eme ka ọ pụta ìhè. Mana m kwenyere na ọbụna maka ndị na-agụ akwụkwọ na-enwe obi ụtọ ka na-enwe nchegbu dị mkpa nke nyocha nyochaa: a na-atụghị anya ya . Nke ahụ bụ, nchekwa data echepụtara maka otu nzube-kwuo mgbasa ozi ezubere iche-nwere ike iji otu ụbọchị mee ihe dị iche. Otu ihe atụ dị egwu nke emeghị ihe abụọ a na-atụghị anya ya n'oge Agha Ụwa nke Abụọ, mgbe a na-eji ọnụ ọgụgụ gọọmentị enyere aka na mgbukpọ a na-eme megide ndị Juu, Roma, na ndị ọzọ (Seltzer and Anderson 2008) . Ndị statisticians ndị na-anakọta data n'oge udo dị ka o doro anya na ha nwere ezi ebumnuche, ọtụtụ ụmụ amaala kwenyesiri ike na ha ga-eji data ahụ eme ihe. Ma, mgbe ụwa gbanwere-mgbe ndị Nazi bịara ike-data ndị a nyere ihe omume nke abụọ a na-atụghị anya ya. O doro anya na, mgbe nchekwa data dị adị, ọ na-esiri ike ịtụ anya onye nwere ike ịnweta ya na otu esi eji ya. N'eziokwu, William Seltzer na Margo Anderson (2008) edepụtawo ihe iri na asatọ nke usoro data ndị mmadụ na-etinye ma ọ bụ nwee ike itinye aka na mmegbu mmadụ (okpokoro 6.1). Ọzọkwa, dị ka Seltzer na Anderson na-ekwu, ndepụta a dị ka ọ bụ ihe na-adịghị eleda anya n'ihi na ọtụtụ mmejọ na-eme na nzuzo.
Isiokwu nke 6.1: Ọnọdụ ebe ana - etinye Akaụntụ Data Ọnụ ma ọ bụ nwee ike itinye aka na Mmegbu Ndị Mmadụ. Hụ Seltzer na Anderson (2008) iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere ikpe ọ bụla na nsonye nsonye. Ụfọdụ, ma ọ bụghị ihe niile, banyere okwu ndị a gụnyere itinye aka abụọ na-atụghị anya ya.
Ndi mmadu ma obu ndi otu
Ikike mmadu mebiri ma ọ bụ echiche chere na ọ bụ n'echiche
Australia 19 na mmalite narị afọ nke 20 Aborigines Ndebanye aha mmadụ Migration akwagide, ihe mgbukpọ
China 1966-76 Ndị na-eme ihe ọjọọ n'oge mmalite mgbanwe ọdịbendị Ndebanye aha mmadụ Mbugharị a gbara ọsọ, kpalitere ìgwè mmadụ ime ihe ike
France 1940-44 Ndị Juu Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, akwụkwọ nchịkọta pụrụ iche Mbugharị a gbara ọsọ, mgbukpọ
Germany 1933-45 Ndị Juu, Rom, na ndị ọzọ Ọtụtụ Mbugharị a gbara ọsọ, mgbukpọ
Hungary 1945-46 Ndị Germany na ndị na-asụ asụsụ German 1941 ọgụgụ ọgụgụ mmadụ Mbugharị a gbara ọsọ
Netherlands 1940-44 Ndị Juu na Rom Usoro ndebanye aha ndị mmadụ Mbugharị a gbara ọsọ, mgbukpọ
Norway 1845-1930 Samis na Kvens Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ Ịgba ọcha nke agbụrụ
Norway 1942-44 Ndị Juu Ndepụta aha pụrụ iche na ndepụta aha obodo Mgbukpọ
Poland 1939-43 Ndị Juu Ihe kachasị mkpa Mgbukpọ
Romania 1941-43 Ndị Juu na Rom 1941 ọgụgụ ọgụgụ mmadụ Mbugharị a gbara ọsọ, mgbukpọ
Rwanda 1994 Tutsi Ndebanye aha mmadụ Mgbukpọ
South Africa 1950-93 Ndị Africa na "ndị na-acha" 1951 ọnụ ọgụgụ mmadụ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ Echebeghi, onye nhoputa ndi mmadu ajuju
United States Narị afọ nke 19 Ụmụ amaala mba Mgbaghara pụrụ iche, ndebanye aha obodo Mbugharị a gbara ọsọ
United States 1917 Ndị a na-enyo enyo na-emebi iwu 1910 ọnụ ọgụgụ Nchọpụta na ịkatọ ndị na-ezere ndebanye aha
United States 1941-45 Ndị Japan ndị America 1940 onuogugu Mbugharị a na-akwagide na nbanye
United States 2001-08 Ndị na-eyi ọha egwu chere Nyocha nke NCES na data nhazi Nnyocha na ikpe ikpe nke ndị na-eyi ọha egwu na ụlọ na mba
United States 2003 Ndị Arab-America Ọnụ ọgụgụ 2000 Amaghi
USSR 1919-39 Obere obodo Ụdị ọnụ ọgụgụ dị iche iche Migration akwagide, ntaramahụhụ maka mpụ ndị ọzọ dị njọ
Ndị na-eme nchọpụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị oke, nke dị nnọọ anya site na ihe ọ bụla dịka itinye aka na mmebi iwu ndị mmadụ site na iji ọrụ nke abụọ. Enwere m ike ikwurịta ya, Otú ọ dị, n'ihi na echere m na ọ ga-enyere gị aka ịghọta otú ụfọdụ ndị pụrụ isi meghachi omume n'ọrụ gị. Ka anyị laghachi na Nrụcha, Ties, na Oge, dị ka ihe atụ. Site na ijikọta data site na Harvard zuru ezu na granular data sitere na Facebook, ndị nchọpụta ahụ nwere echiche bara ụba banyere ọdịmma mmadụ na omenala nke ụmụ akwụkwọ (Lewis et al. 2008) . Nye ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta mmekọrịta ọha na eze, nke a yiri ka nchekwa data nchekwa, nke a pụrụ iji mee ihe ọma. Ma nye ụfọdụ ndị, ọ dị ka mmalite nke nchekwa data nke mbibi, nke a pụrụ iji mee ihe n'echeghị echiche. N'ezie, ọ bụ ma eleghị anya, ntakịrị nke abụọ.
Na mgbakwunye na nyocha onyunyo, ndị nchọpụta-ọzọ na mmekọrita ya na ụlọ ọrụ na gọọmentị-nwere ike itinyekwu aka na ndụ ndị mmadụ ka ha wee nwee ike ịmepụta usoro nchịkwa. Dịka ọmụmaatụ, na Contagion Emotional, ndị nnyocha debanyere aha 700,000 mmadụ na nnwale na-enweghị nkwenye ma ọ bụ mmata. Dị ka m kọwara na isi nke 4, ụdị nkwakọba nzuzo nke ndị na-abanye n'ime nchọpụta abụghị ihe a na-ahụtụbeghị, ọ dịghịkwa achọ nkwado nke nnukwu ụlọ ọrụ. N'ezie, na isi nke 4, m kụziiri gị otu esi eme ya.
Na ike nke a, ndị na-eme nchọpụta na-agbaso iwu, iwu, na ụkpụrụ na-enweghị isi . Otu ihe kpatara nke a bụ na ike nke afọ dijitalụ na-agbanwe ngwa ngwa karịa iwu, iwu, na ụkpụrụ. Dịka ọmụmaatụ, Iwu Ọchịchị (usoro nke iwu na-achịkwa ọtụtụ nchịkọta ego nke gọọmentị na United States) agbanwebeghị kemgbe 1981. Isi ihe nke abụọ na-ekwekọghị ekwekọ bụ na a na-arụrịta ụka na-emekarị ihe ndị dị ka nzuzo dịka ndị na-eme nchọpụta , ndị na-eme atụmatụ iwu, na ndị na-eme mgbanwe. Ọ bụrụ na ndị ọkachamara na mpaghara ndị a enweghi ike iru otu nkwekọrịta edo, anyị ekwesịghị ịtụ anya na ndị ọkachamara na-eme nchọpụta ma ọ bụ ndị na-eme ihe na-eme ya. Ihe nke atọ na nke ikpeazụ nke ekwekọghị ekwekọ bụ na ịmụba dijitalụ afọ na-arịwanye elu n'ime ebe ndị ọzọ, nke na-eduga na ụkpụrụ na iwu na-achịkwa. Dịka ọmụmaatụ, Emotional Contagion bụ mmekorita n'etiti ọkà mmụta sayensị na Facebook na prọfesọ na nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na Cornell. Na oge ahụ, ọ bụkarị na Facebook iji mee nnukwu nkwenye na-enweghị nlekọta nke atọ, ma ọ bụrụhaala na nnwale ahụ kwadoro usoro ọrụ nke Facebook. Na Cornell, ụkpụrụ na iwu dị nnọọ iche; ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nyocha niile ka Cornell IRB ga-enyocha. Ya mere, olee usoro nke iwu kwesịrị ịchịkwa Contagion-Facebook's ma ọ bụ Cornell's? Mgbe enwere iwu, iwu, na iwu na-enweghị isi, ndị na-eme nchọpụta nke ọma nwere ike inwe nsogbu ime ihe ziri ezi. N'ezie, n'ihi enweghị nkwekọrịta ahụ, enweghi ike ịbụ otu ihe ziri ezi.
N'ozuzu, njirimara abụọ a-ikewanyewanye na enweghị nkwekọrịta banyere otu a ga-esi jiri ike ahụ mee ihe-pụtara na ndị nchọpụta na-arụ ọrụ na afọ dijitalụ ga-eche nsogbu nsogbu maka ọdịnihu ihu. N'ụzọ dị mma, mgbe ị na-eche nsogbu ndị a ihu, ọ dịghị mkpa ịmalite ịcha. Kama nke ahụ, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịchọta amamihe site na ụkpụrụ ụkpụrụ omume na mbụ, na isiokwu nke abụọ ngalaba.